Properties for Sale in Dagon Myothit (East) - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Properties for Sale in Dagon Myothit (East)
🔷 အရှေ့ဒဂုံစက်မူ့ဇုန်🔷 နေရာကောင်းမြေကွက်ရောင်းမည်။
🔷 မြေအကျယ်-1ဧက 🔷 မြေဖို့အုတ်ခတ် 🔷 နေရာကော...
Ad Number S-10171665
အရှေ့ဒဂုံ ၇ ရပ်ကွက်က လုံးချင်းအိမ်လေးကို တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်
770 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10170010
AMS402 #အရှေ့ဒဂုံ၊ (2) ရပ်ကွက် (22 x 60) 2.5RC လုံးချင်း (ဂရန်) ရောင်းမည်။
AMS402၊ အရှေ့ဒဂုံ၊ (2) ရပ်ကွက် (22 x 60) 2.5RC M-1, B-1 (ဂရန်) 💵 စျေးနှု...
Ad Number S-10163233
AMS400၊ အရှေ့ဒဂုံ၊ (12) ရပ်ကွက် (20 x 60) 2RC(SS) လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။
AMS400၊ အရှေ့ဒဂုံ၊ (12) ရပ်ကွက် (20 x 60) 2RC(SS) B-4 (ပါမစ်) 💵 ဈေး...
Ad Number S-10163200
**အရှေ့ဒဂုံ တပင်ရွှေထီးလမ်းမနီး ဗိုလ်မင်းခေါင်လမ်းနီးရပ်ကွက်အတွင်းလမ်းမကျယ် တိုက်အသစ်...
Ad Number S-10177588
🛑⚜️အိမ်ကောင်းအိမ်သန့် ရှာနေသူများအတွက် တစ်ပင်ရွှေထီ လမ်းမ နီး 🏠 အရှေ့ဒဂံု / ၈ ရပ်ကွက်...
Ad Number S-10177535
📣#တည်နေရာ -♥အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်♥ 🛑⚜️ အရှေ့ဒဂုံ 11ရပ်ကွက် တပင်ရွှေထီးလမ်းမ...
Ad Number S-10177473
Ad Number S-10177382
အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် အကျယ်-(20x60) အိပ်ခန်း (2)ခန်းပါ အိပ်ခန်း(၂)ခန်းဖွဲ့ပြီးသော လုံးချင်းအိမ်လေး...
Ad Number S-10176794
အိမ်ဝယ်ဖို့အရေးတစ်ကြီး ရှာနေကြတဲ့ ကြည်မြန်မာရဲ့ လူကြီးမင်းတို့အတွက် အရှေ့ ဒဂုံ...
Ad Number S-10175643
Ad Number S-10174713